मान्छेलाई आतंकित गर्छ भने सरकार त्यस्ता सबैलाई जेल हालेरै सबक सिकाउ । – Page9– PanchKhal Online
Home/समाचार/मान्छेलाई आतंकित गर्छ भने सरकार त्यस्ता सबैलाई जेल हालेरै सबक सिकाउ ।
मान्छेलाई आतंकित गर्छ भने सरकार त्यस्ता सबैलाई जेल हालेरै सबक सिकाउ ।
काठमाडौं : साधु, सन्त, योगी, जोगी, भूत भविष्य वक्ता, त्रीकालदर्शी, हास्तरेखा विज्ञ, अनुहार हेर्ने ‘फेस रिडर’हरुमा विश्वास गर्ने हाम्रो समाज यस्ता साधु सन्तहरुको सम्मान गर्दछ । परापूर्व काल देखि हाम्रो समाजले सम्मान दिएको र स्थान दिएको ज्योतिष विधा आफैमा एउटा यस्तो स्विकार्य पेशा हो ।
हजुर‘बा’हरुले आफ्ना बाज–बराजुहरुबाट र उनीहरुले तिनका पनि कुप्रा बुबाहरुबाट सिक्दै आएका ज्ञान आज भोलि बजारमा बिक्ने मसला भएको छ, भन्ने सुन्दा गाउँघरका प्रतिष्ठित ज्योतिष ‘बा’ हरुलाई कति नमिठो लाग्दो हो । आजभोलि युट्युब भिडियोहरुको टे«ण्डिङमा देखिने पिता र माताहरुले परम्परागत ज्योतिष विज्ञानको ध्वज्जी उडाइरहेका छन् । एस्ट्रोनोलोजी, न्युमरोलोजी र साइन्सको उचित प्रयोगले मानिसको स्वभाव, ग्रहरुको स्थान, त्यसलाई पृथ्वीमा पर्ने विभिन्न खाले प्रभाव सजिलै भन्न सकिन्छ ।
विज्ञानले पनि यसको अस्तित्व अस्विकार गरेको छैन । एउटा भनाइ नै छ, कि साइन्स एक्सपेरिमेन्टमा विश्वास गर्छ भने अध्यात्मक एक्सेपिरियन्समा विश्वास गर्छ । साइन्स भिलिभ्स इन एक्सपेरिमेन्ट, स्पिरि च्वालिटि भिलिभ्स इन इक्सपिरिएन्स । ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्याको सम्मान मात्र होइन संरक्षण समेत गर्नुपर्छ । योे सँगै हाम्रा धेरै संस्कृति र सभ्यताहरु छन् जसलाई लिएर अन्य देशहरुले विकासको खाका कोरे ।
तर दुखको कुरा संसारलाई सभ्यता सिकाउने हामीलाई सभ्याता सिकाउन पश्चिमी देशहरु लागि परेका छन् । कारण हाम्रो संस्कृती र रीति रिवाजको वैज्ञानिकता बारे कहिल्यै कसैले अध्ययन नै गरेन। धामी झाँक्री किन राखिन्थ्यो ? तिनले उच्चारण गर्ने मन्त्र, तिनले ठटाउने ढ्याङग्रोको आवाज, तिनले छर्किने अक्षता बारे केही कसैलाई थाहा नै छैन । कुनै कालमा त्यसको अर्थ थियो होला । तर आज त्यसबारे कसैलाई थाहा छैन र त्यो एउटा अन्धविश्वास बाहेक केही रहेन ।
धामी झाँक्रीको भेषमा कुखुराको मासु खान पाउने, पैसा, चामल पाउने भएपछि त्यसलाई पाप र धर्ममा व्याख्या गर्न थालियो र धर्मको खोल ओडेर धेरै धामी झाँक्रीहरुले महिलाहरु माथि विभिन्न शोषण गरे र ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै रक्सीले मातेर हचुवाको भरमा उपचार गराउने निहुँमा धेरैको ज्यान लिए । शुद्ध, शरीर, शुद्ध मन, पवित्र उदेश्य र सही मन्त्रोच्चारणको प्रभाव परापूर्वककालमा पक्कै पनि पर्दथ्यो होला ।
तर धामी झाँक्री विद्या जान्ने निहुँमा सित्तैमा कालो बोको, नपाए कालो कुखुराको मासु खान पाउनेहरुले मोज र भोज मात्र गरेनन् अपराध पनि गरे ।म अध्यात्मको ज्ञाता होइन न त यसको विराट परिभाषालाई बुझ्न–बुझाउन सक्ने ज्ञान नै राख्दछु । अल्पज्ञान नै सही एउटा कुरा चाँही भन्छु नै भन्छु । कि लोभी, पापीहरुले संस्कारलाई आडम्बर बनाए, टाठा–बाठाहरुले जात र धर्मको नाममा सोझा निमुखाको शोषण गरे ।
छुवाछुत जस्तो घृणित विकृती भित्र्याएर यो समाजलाई आजसम्म पनि युगौं पछाडि पारे । मान्छेलाई मान्छेले छुन नहुने पनि हुन्छ काहीँ? यस्तै केही कुपात्रहरुले आफ्नो फाइदाका लागि संस्कार र संस्कृतिको गलत व्याख्या गरे र आज संसार विकासको चरम चुलीमा पुगिसक्दा पनि हामी मान्छे भएर अर्को मान्छेले छोएको खाँदैनौ, पानी छुँन, इनार प्रयोग गर्न दिदैनौँ । छि ! कति लाज मर्दो समाज निमार्ण गरेका छौ हामीले ?
अनि हाम्रो विकास हुन्छ ? यो गतिले कहिले पनि हुँदैन। हिजोको संस्कार विस्तारै विस्तारै विकृतिमा परिणत हुँदै गयो केही स्वार्थीहरुका कारण, जसको साक्षी हामी बस्न पाएनौं। त्यसैले कुनै ज्यादै धुर्त स्याल जस्तो व्यक्तिले मरेका मान्छेलाई खुसी पार्न लुगा–फाटा, मिष्ठान्न भोजन, वेड विस्तारा दान दिन भन्यो । यसको पनि वैज्ञानिकता त पक्कै थियो होला । तर, केही बाठा व्यक्तिहरुले दान दक्षिणालाई अनिवार्य गराएर फ्रिमा जीवनभर पुग्ने सामान पाउन थाले ।
समान दिएर, खाना खुवाएर, जुत्ता देखि टोपी सम्म फ्रिमा लिएर, टिका लगाएर, माला लगाउन लगाएर, दक्षिणा लिएर, खुट्टा ढोगाएर पिठ्युँमा बोकाएर घर पु¥याउने चलन चलाउने जति बाठो मानिस आज सम्म मैले भेटेको छैन । सायद यो चलन यस्तो थिएन, विस्तारै यसमा विकृति आयो र पापको डर देखाएर मान्छे लुट्न सुरु गरियो । ठीक त्यस्तै विकृति फैलाउने रिहर्सल गर्दैछन् अचेलका बाबा र माता पिताहरु ।
ग्रह दशाबारे जानकारी दिने, केही पूर्व तयारीका लागि सचेत गर्ने गराउनेसम्म ठीक छ,तर फलानो राजा हुन्छ, फलानो प्रधानमन्त्री हुन्छ, यो महिनामा जहाज खस्छ,यो दिन भुइचालो जान्छ, मैले देखे, मेरो आँखा फरफरायो, ओठ, तालु सुक्यो जस्ता अभिव्यक्ति दिएर भ्रम मात्र होइन आतंक फैलाउने जो कोही होस, त्यसता पात्र र प्रविृितको म खुलेर विरोध गर्छु ।
संसारमा अध्यात्म छ तर त्यसका नाममा अराजकता फैलाएर आफ्नो पसल नचलाउन म सारा जोगी, साधु, पार्टीहरुलाई अनुरोध गर्दछु । एउटा मोबाइल एप डाउनलोड ग¥यो भने जन्मकुण्डली आँफै हेर्न सकिन्छ । यो संसारमा त्रीकालदर्शी कोही पनि छैन। सायद हावापानी, भोजनका साथै विचार पनि शुद्ध भएका बेला कुनै युगमा केही मानिसमा यस्तो शक्ति थियो होला ।
आज, फटाई, बेइमानी, कपट, ठगीको प्लान दिमागमा बोकेर, धुँवाको मुस्लो र धुलो भरिएको सास लिएर, मिसावट युक्त विषादी खाना खाएर, भट्टी नछिरे हड्डी नहाँस्ने दिन चर्या बाकेर कसैले पनि मैले भुत भविष्य वर्तमान देखेको छु भन्छ भने सरकार, त्यस्ता व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर । अझ एक स्टेपमाथि गएर यही दिन प्लेन खस्छ यही दिन भुइचालो जान्छ भनेर मान्छेलाई आतंकित गर्छ भने सरकार त्यस्ता सबैलाई जेल हालेरै सबक सिकाउ ।